Range Dynamic: Fa maninona no tsy maka ny zavatra hitan'ny masontsika ny fakantsarintsika? | Famoronana an-tserasera
Sehatra mavitrika: Fa maninona no tsy maka ny zavatra hitan'ny masontsika ny fakantsarintsika?
Ny fakantsary fakana sary dia nandalo fivoarana nahakivy. Hatramin'ny niaviany lavitra indrindra amin'ny fakantsary obscura ka hatramin'ny fizotry ny fanaovana nomerika, dia mpandray anjara tamin'ny famoronana fakantsary fakana sary toa ny zavamananaina iray isika, karazana olona iray toa ny zavamananaina rehetra izay nahavita nanamboatra ny tenany sy nifanaraka tamin'ny fitakiana. ary ny fahaizan'ny sivilizasiôna. Ny fandinihana eo amin'ny sehatry ny fahitana sy ny fakana ny zava-misy antsika ary koa ny fanatonana ny fanampiana ara-batana dia nahatonga azy io ho mora azo kokoa tontolo iray mifanindran-dàlana izay voafandriky ny mandrakizay ny foto-kevitra sy ny soritry ny traikefa ara-tsosialy, amin'ny endrika vavolom-belona amin'ny lasa taloha.
Hatramin'ny nahitanay fa afaka manala fotoana amin'ny alàlan'ny milina iray izahay, dia nanomboka hazakazaka mankamin'ny fahalavorariana, nitady nuansa bebe kokoa, lalindalina, sisin'ny hetsika hanovana ilay hetsika mangatsiaka ho zavatra mendri-pitokisana sy feno. Raha ny marina dia ho tsikaritrareo fa isaky ny mitranga ny fandrosoana sy ny tolo-kevitra haingana kokoa. Isan-kerinandro, saika isan'andro, misy ny fandrosoana eo amin'ny sahanay izay hita taratra amin'ny première an'ireo fitaovana vaovao natao hanatonana ny sary amin'ny fomba mazava kokoa. Na izany aza, na eo aza ireo fandrosoana lehibe tsy mbola nahatratra ny fara-tampon'ny fizotran'izany, mbola tsy vitantsika ny mamerina ny sary tsara indrindra eto an-tany: Ilay nitazan'ny masontsika. Raha ny fahitana azy, ny fakantsary tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ny fialonana amin'ny masontsika. Fa inona io ambany ambany saika tsy azo ihodivirana io? Vakio hatrany dia ho fantatrao izay lazaiko!
Mazava ny valiny: Ny tompon'andraikitra amin'ity tsy fitoviana ity dia ny faritra mavitrika. Ity no masontsivana hametrahana ny fampitahana ary tombanana ny fivoaran'ny fakantsary amin'ny alàlan'ny masinina fakana. Efa niresaka momba ny elanelana dinamika isika indraindray, saingy androany dia te handinika bebe kokoa an'ity hevitra ity aho satria fototra ho an'ny matihanina rehetra eo amin'ny tontolon'ny sary izany, ary amin'ny alàlan'ity masontsivana ity dia afaka manombatombana isika ny habetsaky ny signal izay azon'ny fakantsary fakan-tsary sy sary.
El Sehatra mavitrika (Range Dynamic) amin'ny zavatra, medium na fanohanana (tsy zavatra manokana amin'ny fakantsary fakana sary) izany dia maneho ny habetsaky ny signal azony raisina, manavaka na maneho izany.
Raha izany no izy, dia mamintina izany izahay arakaraka ny maha lehibe kokoa ny fakan-tsary misy ny fakantsary, ny fiovaovan'ny fambara dia hainy, ny fikirakira ary ny fampiasana azy.. Eo amin'ny sehatry ny fakantsary fakana sary dia refesina amin'ny alàlan'ny setan'ny tonony izay azo zahana (manomboka amin'ny maizina ka hatramin'ny maivana indrindra) ny elanelana mavitrika.
1 Fa ahoana no ahafahantsika mandrefy ny halaviran'ny sary?
2 Fa maninona no manan-danja tokoa ny Range Dynamic an'ny fakan-tsary?
Fa ahoana no ahafahantsika mandrefy ny halaviran'ny sary?
Matetika izahay dia miasa miaraka amin'ny sary tsy fantatra fiaviana (indrindra rehefa azontsika amin'ny antoko fahatelo) ary satria tsy nisambotra ireo sary ireo izahay ary tsy niara-niasa tamin'ny masontsivana fisamborana, azonay fantarina hoe aiza ny toerana misy ny sarinay.
Amin'ireny tranga ireny tena ilaina ny fitaovana histogramme. Imbetsaka isika no niresaka momba izany (ohatra rehefa mifampiraharaha amin'ny fampiharana Lightroom) ary noho io dia afaka manana orientation momba ny toetrantsika isika.
Ny histogram dia manampy antsika amin'ny famakafakana ny toetran'ny fakantsika sary ary mamantatra ireo lesoka sy ireo faritra mihoa-pampana na tsy misy ambara. Amin'ny alàlan'ny histogram, isika dia afaka mahita fifandanjana sy miasa amin'ny fanitarana ny elanelam-be.
Eto aho manolotra ohatra iray miaraka amin'ny sary roa izay samy hafa ny soatoaviny. Ny voalohany dia tsy dia mifanohitra firy noho ny faharoa, zavatra hita taratra amin'ny histogram.
Ao amin'ny voalohany dia ahitantsika ny tsy fisian'ny soatoavina feno ao amin'ny faritra alokaloka sy ny faritra misongadina, raha ny faharoa kosa dia mahita fantsom-panazavana somary midadasika kokoa isika taorian'ny nanatsarana azy io dia nampitomboinay ny isan'ireo feo sy alokaloka ao anatin'izany ny tonony izay mirona mainty sy alokaloka izay fotsy.
Fa maninona no manan-danja tokoa ny Range Dynamic an'ny fakan-tsary?
Ny jiro no votoatin'ny fizotry ny fandraisana mpiasa iray manontolo. Miara-miasa amin'ny hazavana amin'ny teny voalohany izahay, io no tena mpandray anjara izay manitatra, hita taratra na variana amin'ireo zavatra iasany. Alaivo an-tsaina hoe haka sary iray amin'ny seho iray izay manolotra zavatra maivana sy maizina iray isika, ohatra ny jiro aoriana. Amin'ireny tranga ireny, ny fakan-tsary dia tsy maintsy manana fari-pahaizana mavitrika farafahakeliny mba hahafahany misolo tena sy misambotra ireo zavatra voafarintsika tsara ary miaraka amina mazava tsara.
Ireo fakan-tsary mampiseho sakana mavitrika ambany ireo dia hamerina ny lesoka, sary voafaritra tsy dia voafaritra tsara ary tsy fahampian'ny nuansa any amin'ireo faritra be hazavana sy any amin'ireo faritra tsy misy jiro.
Misy ifandraisany mivantana izany ny isa f, foto-kevitra lehibe iray lehibe ary hiresaka lalindalina kokoa amin'ny lahatsoratra manaraka izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Sehatra mavitrika: Fa maninona no tsy maka ny zavatra hitan'ny masontsika ny fakantsarintsika?
Tetikasa Internet, hevitra voalohany